कांग्रेसभित्रको कंश प्रवृत्तिबिरुद्ध डा. शेखरको आवश्यकता - नेपालबहस
कांग्रेसभित्रको कंश प्रवृत्तिबिरुद्ध डा. शेखरको आवश्यकता
| १६:४९:५३ मा प्रकाशित
जहाँ पनि सज्जन र योग्य व्यक्तिहरुको मौनताको फाईदा फटाहा र दुर्जनहरुले नै उठाउने हो । यस्तै बेलामा बिद्वत वर्ग सुत्ने अनि फटाहाका नाईकेहरुले देशको ढुकुटी लुटने हो । मुलुकको बिडम्बना नै भन्नु पर्दछ एउटा मिहेनती किसान, मजदुर, उद्योगी, व्यपारी, कर्मचारी जीवनभर परिश्रम गर्दा पनि उसलाई जीवन गुजारा चलाउन धौ धौ परिरहेको हुन्छ । त्यही ठाउँमा दलको झोला बोकेकै भरमा आफु र आफ्ना तीन पुस्तालाई पुग्ने गरी कुम्ल्याउन भने मज्जाले मिलिरहेको हुन्छ ।
देशको राजनीति नै निर्लज्ज भएपछि, देशको अस्मितालाई नै अर्धनग्न बनाएपछि युगौंदेखिका वीर र स्वाभिमानी भनेर चिनिएका तमाम नेपालीले दलका भ्रष्ट नेताहरुका सामु आफ्नाे सगरमाथा झै ठडिएको शिरलाई धनुषटंकार झै झुकाएपछि, आठ कक्षा फेलले डिग्री र पीएचडी होल्डरलाई आफ्नाे धोती बोकाएपछि निस्किने परिणाम चाँहि कस्तो खोजेको हो नेपालीले ? अझैसम्म पनि बुझ्न नसकिएको पाटोको रुपमै देखिन्छ ।
आम शिक्षित तथा योग्य नागरिकहरु मौन बस्नुको परिणाम अझ भनौं सरकारभन्दा दश गुणा बढी सुताहा प्रतिपक्ष भएको मुलुकमा अब आम सर्वसाधारण नागरिकहरुले कस्को भरोशा गर्नु ? विग्रिएका, भत्किएका, च्यातिएका नागरिकका मनहरु कुन चाँहि सुचिकार कहाँ लगेर सिउनु ? सिटामोलसम्म किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका नेपाली नागरिकलाई पटक पटकका पीसीआर र स्वास्थ्य जाँच पास अझै बोझिलो भएको यो मुलुकमा कस्ले आफ्ने ? मुलुकको यस्तो दर्दनाक अवस्था भैसक्दा पनि सरकारसँगै सती जाने प्रतिपक्ष र सरकारका गलत कामका बिरुद्धमा चुँईक्कसम्म नबोल्ने नागरिक भएको मुलुकमा अनौक्लास पढेका लाल बुझक्कडहरुले जग हँसाए भनेर के को रोईलो गर्नु ?
साच्चै भन्ने हो भने देशको राजनीति बिग्रिनुमा नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण हात छ । यसैको फाईदा नेपालमा रहेका कम्युनिष्टहरुले उठाईरहेको कुरा नेपाली जनजनलाई थाहा छ । सिंगो मुलुकमा र नेपाली कांग्रेसमा विश्वेश्वरप्रसाद कोईरालाको बिरासत थाम्ने मात्र हैन समाजवादलाई ग्वाम्लाङ्ग अंगालो हाल्ने नेतृत्व चाहिएको छ । नेपाली जनातामा ढाँटको खेती गर्ने र आफ्नाे ढुकुटी भर्ने समुह या दलहरुको बिगबिगी तथा क्रियाशिलता बढिरहेको बेला सन्तुलित विचार र सफल नेतृत्वको बिश्वसनिय आधार तैयार गर्नु परेको छ ।
बिधिवत रुपमा विसर्जनको बाटोमा हिँड्न चाहने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एजेण्डामा मिल्न चाहने, आफ्नाे निहित व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टीको मूल मर्ममा ठेस लगाउन उद्धत रहनेहरुलाई सुधारको बाटेमा हिाडाउन सक्ने, पुराना, त्यागी, अनुभवी, विचारले खारिएका, समाजवादको मर्म, राजनीतिक धर्म बुझेका निष्ठावान नेता र कार्यकर्ताहरुको भावना र उनीहरुले गरेको निस्वार्थ लगानी बुझ्न सक्ने नेतृत्व अहिले नेपाली जनताले खोजिरहेका छन् । जुन नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले मात्र दिन सक्ने रहेछ भनेर अब नेपाली जनतालेसमेत गहिरिएर बुझिसकेका छन् ।
नेपाली राजनीतिक धरातल र नेपाली भुमीमा नेपाली कांग्रेसले अहिले कुनै विचार किन्नु पर्दैन, पार्टी भित्र कुनै प्रकारको समस्याहरु देखा परे पनि छिमेकी मुलुकका राजदूत र खुफिया एजेन्सीका प्रमूहरु बोलाउँदै हिडनु पर्दैन । अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले डबल डफेदारको झण्झट बेहोर्नु परेको पनि छैन । पितृ भैसकेका, रोगले चारैतिरबाट गाँजिसेका, बुढा नेता पनि स्याहार्नु परेको छैन । नेपाली कांग्रेस मात्र त्यस्तो पार्टी हो जसले आफ्नाे राजनैतिक सिद्धान्त र पार्टीको नाम बर्षै पिच्छे फेर्नु परेको पनि छैन । बर्षमा चार पटकसम्म पार्टी फेर्नु पनि पर्दैन । फेर्नु छ त केबल खिया लागेर खाली काम लाग्न छोडेका राजनैतिक औजारहरु ।
यसका लागि पार्टीको महाधिवेशन नै एक उपयुक्त स्थान हो । जहाँ राजनैतिक बिचार र विकासका योजनाहरुको, मुलुक निर्माणका लागि सजाईएका सपनाहरुको, जनताको अवस्था माथि उठाउन बनाईएका कार्यक्रमहरुको बिक्री गरिन्छ । वास्तवमा विचारहरुको सट्टेबाजी गरिन्छ । जहाँ पार्टीको निर्धारित नीति तथा कार्यक्रमहरुका आधारमा आम नेता तथा कार्यकर्ताहरुका माझबाट सिंगो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्न सक्ने एक सक्षम, सबल र निस्वार्थ भावनाले अभिप्रेरित भएको रानो पत्ता लगाईन्छ । सोही रानोको नेतृत्वमा सिंगो मौरीको बथानले विचरण गर्नेछ ।
जहाँ कुनै व्यक्ति बिशेषको गुट, उपगुट र वैचारिक बौद्धिक समूहहरुका नाममा कुनै समूहहरु नरहुन । सिंगो नेपाली कांग्रेसको परिकल्पना नै आगामी चौधौ महाधिवेशनको मुख्य एजेण्डा बन्न सक्नु पर्छ । बिगतमा नेपाली कांग्रेसका पुराना तथा निष्ठावान नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई वर्तमान नेतृत्वबाट भएका अपमानहरु, असहोगका भावनाहरु, म मात्रै ठूलो हुँ भन्ने नेतृत्व पंतिका कारण ओईलाएका पुराना आस्थाका आधार स्तम्भहरुलाई पनि यस पटकको माहाधिवेशनले बिर्सनु हुँदैन । यसो गर्दा पुराना र द्विगज नेतृत्व बर्गको समेत मन रुँदैन ।
माथि उल्लेख गरिएका नेपाली कांग्रेस भित्रका कंस प्रवृत्तिहरुलाई निर्मूल पार्न यस पटकको माहाधिवेशनमा डा.शेखर कोईराला भगवान श्रीकृष्ण बनेर आउँदैछन् । आगामी चौधौ महाधिवेशनमा डा.शेखर कोईरालाको नेतृत्वमा पाञ्चाजन्य शंख बज्ने निश्चित छ । यसले कतिको निद हराम हुने हो ? कतिको अहिलेसम्म हालीमुहाली गर्दै खाँदै आईरहेको राजनैतिक पद धरापमा पने हो ? कतिका अघिपछि लाग्ने लावालष्कर घटने हुन ? कतिका बर्षौदेखिका भ्रष्टाचारका धाँजा फाटने हुन ? कतिले राजनीतिबाटै टिकट काट्ने हुन ? नेपाली कांग्रेस भित्र अब जे सुकै र जस्तो सुकै परिस्थिति आएपनि सामना गर्नुको बिकल्प छैन ।
राजनैतिक आस्था र विचार बोकेकै भरमा कसैलाई काखा अनि कसैलाई पाखा गरिने छैन । विकासमा राजनीति हैन राजनीतिलाई विकासमा समाहित गरिनेछ । कोईराला कांग्रेस, देउवा कांग्रेस, पौडेल कांग्रेस, सिटौला बौद्धिक समूह हैन सिंगो नेपाली कांग्रेस भएको अनुभूति हुनेछ । सरकार पार्टीप्रति हैन जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछ । विश्वेश्वरप्रसाद कोईरालाले शुरु गरेका विकासका योजना, गणेशमान सिंहले परिकल्पना गरेका बिकासका सपना अनि किसुनजी र गिरिजाबाबुले शुरु गरेका विकासका योजनाहरुले पूर्णता पाउनेछन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरु पनि आफ्नै देश बनाउन आउनेछन् ।
जनताका र देशका पक्षमा काम नगर्ने, राजधानी मै बसेर राजनीतिको फोहोर सोहोर्ने, नेताका आङ्गका झिंगा धपाएर मात्रै आफ्नाे दिन कटाउने, राम्रा र ईमान्दार कार्यकर्ताहरुलाई हतोत्साहित पार्दै डाँडा कटाउने नेतृत्वका बिरुद्ध अब फेरि एक पटक डा. शेखर कोईरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस सफाई अभियान सञ्चालन गरिनेछ । जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोईरालाले भने झै पार्टीमा सुकिला मुकिलाहरुको बोलाबाला चरम उत्सर्गमा पुगेको छ । यसका विरुद्धमा उत्रन सक्ने एउटा दर्बिलो अभिभावक अब नेपाली कांग्रेसले भेटेको छ । अब नेपाली कांग्रेस भित्रको फोहोर झाडी सफाई गरिनेछ । पार्टी भित्र रहेका खेत, कान्ला र बाँझो जमिनलाई सरसफाई गरी उर्भर, हरियाली र उत्पादनशिल नेपाली कांग्रेस बनाईनेछ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई मात्र हैन तमाम नेपालीलाई यति विश्वास छ, यदि डा. शेखर कोईराला पार्टीको सभापति भएमा नेपाली कांग्रेसको मात्र हैन सम्पूर्ण नेपालीको अभिभावक भएको महशुस हुनेछ । राजनैतिक आस्था र विचार बोकेकै भरमा कसैलाई काखा अनि कसैलाई पाखा गरिने छैन । विकासमा राजनीति हैन राजनीतिलाई विकासमा समाहित गरिनेछ । कोईराला कांग्रेस, देउवा कांग्रेस, पौडेल कांग्रेस, सिटौला बौद्धिक समूह हैन सिंगो नेपाली कांग्रेस भएको अनुभूति हुनेछ ।
सरकार पार्टीप्रति हैन जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछ । विश्वेश्वरप्रसाद कोईरालाले शुरु गरेका विकासका योजना, गणेशमान सिंहले परिकल्पना गरेका बिकासका सपना अनि किसुनजी र गिरिजाबाबुले शुरु गरेका विकासका योजनाहरुले पूर्णता पाउनेछन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरु पनि आफ्नै देश बनाउन आउनेछन् । जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी सरकार बन्नेछ । विश्वले हाई डा. शेखर भन्नेछ । समाजवादको पूर्ण र व्यवहारिक उपयोग गर्दै जनकेन्द्रित बिकासका योजनाहरुले स्थान पाउनेछन् । नेपालको बिकास देखेर छिमेकी मुलुकहरु पनि नेपाल हेर्न आउनेछन् ।
म डा.शेखर कोईरालाको राजनैतिक एजेण्डामा सहमति राख्ने एक सामान्य नेपाली भएको नाताले भन्दैछु, अब पनि नेपाली कांग्रेसले डा. शेखर कोईरालालाई चिन्न सकेन भने, नेपाली कांग्रेसका आम नेता तथा कार्यकर्ताहरुको आँखा खुलेन भने, हामी विदेशीका भाडाका टट्टुहरुको ईशारामा अझै लामो समयसम्म नाँच्नु पर्नेछ । नेपाली कांग्रेस जस्तो महान शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक पार्टी पनि कम्युनिष्टहरुको शरणमा पर्दै बर्षौ बर्षसम्म बाँच्नु पर्नेछ ।
मानुङकोटमा पूर्वाधार निर्माण गर्न वरिष्ठ नेता पौडेलको जोड ४ घण्टा पहिले
देउवाको आँखा सत्तामा मात्रै २४ घण्टा पहिले
बङ्गलादेशमा झण्डै १७ करोड मोबाइल फोनको प्रयोग १९ घण्टा पहिले
नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै, के होला प्रतिवेदन भीडन्त ? ६ घण्टा पहिले
दश स्थानीय तहका दुई हजार ३८८ घरमा खरका छाना विस्थापित गरिने ६ दिन पहिले
समतामूलक समाज निर्माण भएपछि मात्रै विकास र समृद्धि हुन्छ : खानेपानीमन्त्री मगर ५ दिन पहिले
कप्तान मल्लसँगै तीन क्रिकेटरलाई कोरोना पुष्टि ६ दिन पहिले
शरीरमा पाँच गोली लागेपनि मान्छे जीवितै ! ५ दिन पहिले
साहित्यकार ढकालको गीतकृति ‘लजालु पहाडहरु’ सार्वजनिक ३ दिन पहिले
टोरिनोलाई इन्टर मिलानले हरायो १ हप्ता पहिले
कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाद्वारा समवेदना व्यक्त ३ हप्ता पहिले
कार्तिक २७ गते प्रस्तावित राजदूतहरु खतिवडा, रेग्मी र विश्वकर्माको सुनुवाइ हुने ४ हप्ता पहिले
दलित र अपाङ्गताका क्षेत्रमा बजेट प्रभावकारी भएन १ हप्ता पहिले
दियालो संस्थाको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सकियो ४ हप्ता पहिले
टेबुलटेनिस खेलाडी छनोट १ वर्ष पहिले
जनता समाजवादी पार्टीद्वारा आयोगमा दल दर्ताको निवेदन ७ महिना पहिले
वालिङ नगरपालिकाले एसईई दिने विद्यार्थीलाई वालिङ टेलिभिजन मार्फत पढाउने ८ महिना पहिले